Ikhaya/Internet kunye neBlogs/IPandemia
Ikamva linamhlanje, uninzi lwethu luyiqondile loo nto ngokutyhubela iindidi ngeendidi zeemeko ngenxa yalo bhubhani. Abanye bacinga okanye bacebe ukubuyela "kwisiqhelo", ngelixa kwabanye le nyaniso siphila kuyo sele iyinto entsha yesiqhelo. Makhe sithethe kancinci ngazo zonke ezo nguqu zibonakalayo okanye “ezingabonakaliyo” eziye zatshintsha imihla yethu.
Masiqale, sikhumbule kancinci ukuba yonke into yayinjani ngonyaka ka-2018 - nangona siye saba neenyani ezahlukeneyo -. Ukuba ndinokongeza amava am obuqu, u-2018 undizisele ithuba lokungena kwihlabathi ledijithali, kakhulu kunokuba bendiqonda. Ukusebenza ngocingo kwaba yinyani kum, de kwaba ngo-2019 eVenezuela yaqala ingxaki yenkonzo yombane embi kakhulu kwimbali yethu.
Xa usebenza ukude, izinto eziphambili ziyatshintsha, kwaye yile nto yenzekayo xa i-COVID 19 yaba yeyona nto iphambili kunye nesigqibo kwimisebenzi yemihla ngemihla. Siyazi ukuba kukho utshintsho olukhulu kwindawo yezempilo, kodwa Kwaye ezinye iinkalo ezibalulekileyo ebomini? Kwenzeka ntoni kwimfundo, ngokomzekelo, okanye kwimimandla enemveliso yezoqoqosho?
Kuninzi kwakuyimfuneko ukuya yonke imihla eofisini ukuya kwenza imisebenzi. Ngoku, ibe yinguqu yokwenyani yetekhnoloji, eye yazisa utshintsho kwindlela yokuhlangabezana neenjongo, izicwangciso, kunye neeprojekthi ngaphandle kwesidingo sokuvela kwindawo yokusebenza.
Sele kuyimfuneko ukuba kwabelwe indawo endlwini ukunxibelelana ngomnxeba, kwaye inyaniso yeyokuba kwezinye iimeko kuye kwaba lucelomngeni, ngelixa kwabanye kuye kwaba liphupha. Ukuqala ngenyani yokuba nesiseko setekhnoloji esaneleyo, njengenethiwekhi yoqhagamshelo lwe-Intanethi oluzinzileyo, inkonzo yombane engaphazamisekiyo, kunye nesixhobo esilungileyo somsebenzi, de uqalise ukusuka ekuqaleni ukuze uqhube kwaye uqonde indlela yokusebenza ngomnxeba. Kuba ewe, asingabo bonke abaqhelene nenkqubela phambili yezobuchwepheshe, kwaye asingabo bonke abanokufikelela kwiinkonzo ezisemgangathweni.
Omnye wemingeni ekuthatheni ingqalelo kukuba, Oorhulumente bafanele bahlengahlengise njani imigaqo-nkqubo yabo ukuze baseke amacebo amatsha kweli xesha litsha? Kwaye indlela yokukhula koqoqosho lwangempela kule minyaka yesi-4 yedijithali? Ewe, oorhulumente banesibophelelo sokutyala imali kwiziseko ezingundoqo zobuchwepheshe. Nangona, siyazi ukuba ayingawo onke amazwe analo olu cwangciso kwiSicwangciso soMbuso. Ngoko ke, utyalo-mali kunye nobudlelwane bunokuba ngundoqo ekuvuseleleni uqoqosho.
Kukho iinkampani, amaziko okanye imibutho efuna abasebenzi abakhoyo kwimisebenzi yabo yemihla ngemihla, kodwa ngethamsanqa kukho abanye abaye bakhuthaza ukusebenza ngefowuni okanye ukude nomsebenzi, ngaloo ndlela bevelisa imveliso enkulu kubasebenzi babo. Kuba kufuneka ubone okuhle ekuhambeni ngeepijama ngelixa usebenza, akunjalo? Baye baqonda ukuba akuyomfuneko ukunyanzela umqeshwa ukuba athobele iiyure zaseofisini, logama nje umsebenzi usenziwa, kwanokuba ude umnike ithuba lokwenza ezinye iintlobo zemisebenzi okanye imisebenzi.
Abanye baye bazibuza isizathu sokwanda kwemveliso, kwaye ke, kwindawo yokuqala, into elula yokuba sekhaya inika imvakalelo yokuzola. Kananjalo akunyanzelekanga ukuba uvuke nge-alam enkulu okanye ujongane nezithuthi zikawonke-wonke. Kukho ithuba lokwenene lokuqalisa naluphi na uhlobo lwezifundo, kwaye iiyure zokusebenza azikho umqobo wokondla ingqondo, kwaye akukho nto ibaluleke ngaphezu kolwazi.
Ukukhula kwamaqonga okufunda kube nobundlobongela, uqeqesho kukuzibophelela komntu ngamnye, ukuba phambili. Udemy, Coursera, Emagister, Domestika kunye nezinye iiwebhusayithi ezininzi zivule ifestile ukuze abantu baqonde ukuba imfundo yomgama isebenza njani, kwaye baphulukane noloyiko lwabo lokuzama. Kuthetha ntoni oku?Ukuba ulawulo lomgangatho maluphunyezwe, ukuqaliswa kwezinto ezintsha kufuneka kube yintsika engundoqo kumxholo oya kufundiswa ngootitshala nangabaqeqeshi kula maqonga.
Nokuba ukwazi iilwimi ezintsha kuya kuba yeyona nto iphambili ekukhuleni kobuchwephesha, kuba umxholo omninzi ofumaneka kwiwebhu ukwiilwimi ezinje ngesiNgesi, isiPhuthukezi okanye isiFrentshi. Izicelo eziphathwayo kunye nezinye iindidi zamaqonga okufunda ulwimi zakhuthazwa ngubhubhane, ukusetyenziswa kwe Rosetta Stone, Ablo, izifundo zokude ezifana ne-Open IsiNgesi, ziya kuqhubeka zikhula ngokuthe ngcembe kwiminyaka ezayo. Kwaye, kwabo banikezela ngeeklasi zobuso ngobuso kuphela, kwafuneka baqale ukuphuhlisa indawo ebonakalayo apho banokunikezela ngolwazi kwaye bafumane imbuyekezo yemali ehambelanayo.
Amanye amaqonga abe ne-boom enomtsalane ngalawo abonelela ngemisebenzi okanye imisebenzi emifutshane (iiprojekthi). I-Freelancer.es okanye i-Fiverr ngamanye amaqonga athe afumana ukuhamba okukhulu kwababhalisi abaphezulu, bobabini ukunika umsebenzi kunye nokukhetha njengomgqatswa weprojekthi. Aba banabasebenzi abasebenza njengomqeshwa, ukuba iprofayile yakho ifanelekile kwiprojekthi abanokukunika yona, kwaye ukuba akunjalo, unokwenza uphando ngokuxhomekeke kwizakhono onazo.
Kwelinye icala, kubalulekile ukuthathela ingqalelo ukuba ipesenti yabemi abangenalo nokuba nokwenzeka kokuba nekhompyuter ekhaya. Kanye njengokuba kukho abantu abaye bafumanisa ukuba iphupha ukwenza yonke into besekhaya, kukho inani labantu ebelingumceli mngeni okanye liphupha elibi. I UNICEF ikhutshiwe amanani apho ichaza ukuba ipesenti enkulu yabantwana nabafikisayo abakwazi ukufikelela kwimfundo yomgama, ngenxa yendawo abakuyo, imeko yezoqoqosho okanye ukunqongophala kobuchule bokufunda nokubhala.
Ukungalingani kwezentlalo kufuneka kuhlaselwe, okanye umsantsa ophakathi “kwemigangatho yoluntu” unokuvuleka, nto leyo ebonisa ubuthathaka babanye ekulweni nokuba nokwenzeka kwabanye ukulwa nesi sifo, ukungaqeshwa. Ngamanye amazwi, ubuhlwempu obugqithisileyo bunokuphinda bube yindawo yokuhlaselwa koorhulumente.
Kwamanye amazwe, uphuhliso lwetekhnoloji efana ne-5G yakhawuleza, kuba imfuno yoqhagamshelo lwewebhu oluzinzileyo iye yanda kakhulu, njengoko kuye kwaba nesidingo sokufikelela kwizixhobo eziphathwayo apho zonke iintlobo zemisebenzi zinokwenziwa. Inyani eyongeziweyo kunye nenyani ithathe indawo ebaluleke kakhulu kwiminyaka yakutshanje, iinkampani ziye zasebenzisa obu buchwepheshe bomsebenzi okude kunye nokukwazi ukujonga ukuguqulwa okanye ukwenza izigqibo malunga neeprojekthi zabo.
Ukuvalelwa kuzise izinto ezingalunganga, kodwa nezinto ezintle. Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, i-European Space Agency (ESA) kunye ne-International Energy Agency (IEA) yakhupha iibhulethi ezichaza indlela kwiinyanga zokuqala zokuvalelwa. ubushushu bomoya yehla, kunye nokukhutshwa kwe C02.
Mhlawumbi ukusebenzisa umnxeba kunokunceda ekunciphiseni intlekele esiye sayibangela kwimekobume - oku akuthethi ukuba iya kubeka ngokupheleleyo ingxaki yokusingqongileyo okanye ukuyeka ukutshintsha kwemozulu. Ukuba sicinga ngengqiqo into yokuhlala ekhaya idinga ukusetyenziswa kombane omkhulu, ukusetyenziswa kwamandla ahlaziyekayo kufuneka kusekwe njengento enyanzelekileyo, ukuchasana nawo wonke umsebenzi. Nangona kunjalo, amanye amazwe athathe ngendlela eyahlukileyo, ukwandisa ixabiso leentlawulo kunye nokubeka irhafu yokusetyenziswa kweenkonzo ezifana namanzi okusela kunye nombane, ukuvelisa ezinye iintlobo zeengxaki kubemi (impilo yengqondo).
Ukusebenza ngokufanelekileyo kwenkqubo yezempilo kufuneka kube yeyona nto iphambili, lilungelo lokuqinisekisa ukulondolozwa kobomi, kwaye ukhuseleko loluntu kufuneka lube semgangathweni kwaye lufikeleleke kubo bonke. -kwaye oku ngokuqinisekileyo ngumceli mngeni-. Sicace gca ukuba ayingabo bonke abantu abanokufikelela kunyango lwe-COVID 19 okanye ezinye izifo ezingapheliyo, okanye babe namandla okuthenga okuhlawulela ugqirha ekhaya, singasathethi ke ngokuhlawula iindleko kwikliniki yabucala.
Into ethe yacaca ngeli xesha lezithintelo zezinye iziphumo eziye zafunyanwa ngubhubhane kwinqanaba lempilo yengqondo. Abantu abaninzi babandezeleka kwaye basaqhubeka bebandezeleka uxinzelelo kunye nexhala ngokwedatha ye-PAHO-WHO. Okunxulumene nokuvalelwa (ukungabikho kokudibana ngokwasemzimbeni, ubudlelwane bentlalontle), ukuphelelwa yimisebenzi, ukuvalwa kwamashishini/iinkampani, ukusweleka kwamalungu osapho, nokuqhawuka kobudlelwane. Iimeko ezininzi zobundlobongela basekhaya ziye zavela, iimeko zongquzulwano lwentsapho zinokubangela ukubandezeleka kwengqondo okanye isilumkiso sokuchonga iingxaki zempilo yengqondo.
Eminye imibuzo ekufuneka sicamngce ngayo, ngaba ngokwenene sisifundile isifundo? Ngaba sikulungele ukujongana nemingeni yezobuchwepheshe? Yintoni enokwenzeka ukuba sonke sinamathuba afanayo? Ngaba siwulungele ubhubhane olandelayo? Ziphenduleni kwaye masiqhubeke nokufunda indlela yokuguqula ezi meko zisuka kwembi ukuya kokulungileyo, kukho ithuba elikhulu lokuxhaphaza kwinqanaba letekhnoloji kunye nentlalontle kwaye sikwafumene izakhono esingazange sicinge nokucinga ukuba sinazo, linyathelo elinye ngaphezulu ukuba ngcono.